၇၅ နှစ် အကြာ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အဘိုးအို K.T. Robbins နဲ့ အဘွား Jeannine
By ရေဗန် 14 June 2019
အသက် ၉၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် အဘိုးအိုဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့စဉ်က ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို နှစ်ပေါင်း ၇၅ နှစ်အကြာမှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၄ ခုနှစ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ စစ်မှုထမ်းခဲ့ရတဲ့ K.T. Robbins ဟာ Jeannine လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ တယောက်နဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ချစ်သူသက်တမ်း ၂ လအကြာမှာ အမိန့်ကြောင့် ရှေ့တန်းကို ထွက်ခဲ့ရပြီးနောက် သူတို့ နှစ်ဦး ကွဲကွာခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုပ်သံလိုင်းတခုက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ စစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ အဘိုးအို K.T. Robbins ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ဓာတ်ပုံ ပါလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်သံအစီအစဉ်က တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေကို ရှာဖွေဖို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဘိုးအိုကတော့ “သူ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ မသေချာဘူး”လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် အသက် ၉၂ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘွား Jeannine ကို ကံကောင်းစွာနဲ့ တွေ့ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“စစ်ကြီးတုန်းက သူထွက်သွားတော့ ကျမ အရမ်းငိုခဲ့ရတယ်။ တကယ်ပါ။ ကျမ အရမ်းကို ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာ။ သူ့ကို အမေရိကန် ပြန်မသွားစေချင်ခဲ့ဘူး”လို့ Jeannine က ပြောပါတယ်။
စစ်မှုထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အဘိုးအို K.T. Robbins ကတော့ “ကျနော် သူ့ကို အခုချိန်ထိ ချစ်နေဆဲပါပဲ”လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး ပြန်တွေ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့နေပြီး အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေကျပုံပေါ်ပါတယ်။
Topics: ချစ်ကျွမ်းဝင်, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်, အမျိုးသမီး